မန်ယူလက်ရှိကစားကွက်က ရာသီကုန်တန်းဆင်းရနိုင်ဟု MEN Newsမှာ ဗီဒစ်ပြော – FBV SPORT NEWS
October 5, 2020 By admin Sports News
04.10.2020 က ကစားသွားတဲ့စပါး- မန်ယူ အသင်းရဲ့ ကစားကွက် ကို မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်း ဗီဒစ်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပစ်တင်ရှုံ့ချသွားခဲ့ပါတယ်..မန်ယူဟာ အိမ်ကွင်းမှာစပါးကို6ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်….
ဗီဒစ်က ” ကျနော် မယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့အားသင့်မိပါတယ်…..ဒီလောက်ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်တာက မန်ယူသမိုင်းတလျောက်အဆိုးဆုံးပါ… ပြီးတော့ ကစားသမားတွေဟာ ပွဲထဲမှာ ဂိုးနားရောက်ရင် အရမ်းအားနည်းသွားကျပြီး ပင်နယ်တီရဖို့ ဇာတ်လမ်းဆင်နေသလိုပါဘဲ….ဆိုးရှားက ဒါကို ဘာလို့ ဖြစ်စေခဲ့တာလဲ ကစားသမားတွေက ကိုယ့်စွမ်းရည်နဲ့ ဂိုးရဖို့မကြိုးစားတော့ဘူး ….ပင်နယ်တီဘဲလိုချင်နေကြတယ်….
ကျနော်တို့တွေ ဘော့စ် ( ဖာဂူဆန် ) က အားစိုက်ထုတ်မှု မရှိရင် ကွင်းထဲမှာ ခိုကပ်နေရင် ပွဲထွက်ခွင့်မပေးပါဘူး….အရမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရတယ် စည်းစနစ်တွေအရမ်းကြီးတယ်….ဆိုးရှားလ်ကတော့ လူငယ်တွေကိုအလိုက်လိုက်လွန်းတယ်ထင်မိတယ်ဗျ…..ပြီးတော့ ခိုကပ်နေတဲ့ကစားသမားတွေတချို့ကို အရံခုံထိုင်ခိုင်းသင့်တယ် နာမည်နဲ့ကျော်ကြားမှု ဘောလုံးမှာ ဂိုးမရဘူး …တခြားကစားသမားတွေ အားစိုက်ထုတ်မှုရှိတဲ့ကစားသမားတွေရှီတယ် …နာမည်မပြောတော့ပါဘူး….(ရယ်လျက်)
ကျနော်ပြောပြမယ် …မန်ယူရဲ့ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း မှာ ရာဖေးလ်ဒါဆေးဗား နဲ့ ဖေဘီယို တို့နှစ်ယောက်ကို ဘော့စ် က ( ဖာဂူဆန်) က အားစိုက်ထုတ်မှုရှိလို့ ထုတ်သုံးခဲ့တယ် တကယ်လည်းနောက်တန်း ဘယ်စွန်က နေရာဖေးလ်ဆို ဂိုးတွေသွင်းခဲ့တယ် တိုက်စစ်ထိလည်း လိုက်ပံ့ပိုးခဲ့တယ် အခုအသင်းမှာ အဲ့ဒီလို လူနောက်တန်းတွေလိုနေတယ် ဗဟိုခံစစ်တွေကတော့ အဓိကလိုတယ်ဆိုတာက ဒီရှုံးပွဲက သက်သေဘဲလို့ ဘုတ်အဖွဲ့တေနားလည်သင့်ပြီ…..ဒီလူအင်အားနဲ့ လက်ရှိကစားကွက်တိုင်းဆက်သွားမယ် ဆို ရာသီကုန်မှာ တန်းဆင်းရပါပြီ လို့ MEN Sport News ကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်…